तपाईं कुनै पनि उपकरणमा टिभी च्यानल, कारण देशमा सबै संचालक को सदस्यताका लागि उपलब्ध हेर्न सक्नुहुन्छ जो मार्फत "मेघाफोन", देखि विकल्प। तार, वाइफाइ, मोबाइल - कहीं कहाँ त्यहाँ इन्टरनेट छ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेवा को व्यवस्थापन कस्तो छ? यसको प्रयोग को अवस्था के हो र कुनै पनि प्रतिबन्ध अवस्थित कि? को "मेघाफोन-टिभी" कसरी असक्षम? यी सबै मुद्दाहरू हालको लेखमा सम्बोधन गरिनेछ।
उल्लिखित रूपमा, कुनै पनि सेवा प्रदायकको सिम कार्ड यसलाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा प्रयोग कि बिना कुनै पनि व्यक्ति विकल्प छ। जडान र लागत आवश्यकताहरु कम्पनी ग्राहकहरु लागि "मेघाफोन" को एक हो, र अन्य कम्पनीहरु को संख्या मालिक लागि। यसबाहेक, यो हेर्नका लागि कुनै उपकरण को अधिग्रहण पूरा गर्न आवश्यक छैन "मेघाफोन-टिभी।" कुनै पनि समयमा सेवा रद्द - मासिक शुल्क दैनिक कटौती किनभने पैसा गुमाउनुपर्ने बिना।
हामी "मेघाफोन-टिभी" अक्षम कसरी जडान गर्न र कसरी कुरा अघि यो सेवा को सुविधाहरू को विवरण हुनुपर्छ।
सदस्यता शुल्क को मूल्य सदस्य द्वारा हेर्न गरिने टिभी च्यानलहरूको प्याकेज निर्धारण गरिन्छ। कुल9विकल्प प्याकेजहरू, एक सय च्यानल बारे समावेश प्रत्येक छन्। तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एक वा धेरै विकल्पहरू। प्याकेजहरू लागि सदस्यता शुल्क लागत एक आठ rubles देखि हुन सक्छ।
टिभी, स्मार्टफोन बाट, पाटी गर्न: च्यानलहरू हेर्नुहोस् कुनै पनि उपकरणबाट हुन सक्छ। तपाईं पाँच उपकरणहरू, यो विकल्प जडान गर्न सक्नुहुन्न। जब तपाईं अर्को उपकरण थप्न प्रयास - छैटौं, प्रणाली चेतावनी जारी हुनेछ।
को "मेघाफोन", एक विशेष प्लग देखि टिभी हेर्न - बालुवाको ढिस्को HD (यसलाई इन्टरनेटमा डाउनलोड स्थापित गर्न सकिन्छ)।
च्यानलहरू अनलाइन मोड मा व्यवस्थित को प्याकेजहरू: बन्द वर्तमान र नयाँ विशिष्ट अवधिको लागि प्रतीक्षा बिना, कुनै पनि समयमा जडान।
सेवा को सक्रियता
कम्पनी पहिलो पटक "मेघाफोन" को प्रस्ताव प्रयोग गर्न निर्णय गरेका ती मानिसहरू लागि, प्रोमो अवधि प्रदान। प्रयोग तीस दिन भित्र, तपाईं नि: शुल्क टिभी च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ। "मूल" जडान एकै समयमा प्याकेज। सेवा असक्षम छ सदस्य हुनेछैन परीक्षण अवधि को अन्त मा भने, त्यसपछि अर्को दिन मासिक शुल्क कटौती सुरु हुनेछ। कसरी असक्षम गर्न "मेघाफोन-टिभी", भनेर के गरेनन्? यो अझ विस्तृत व्याख्या तल गरिनेछ।
जडान लागि, यो कुनै पनि इन्टरफेस सेवा मार्फत व्यक्तिगत सेवाहरू पृष्ठ मार्फत इन्टरनेट मा मोबाइल आवेदन मार्फत बनेको छ। तपाईं ग्राहक बनाउन आवश्यक सबै - आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर निर्दिष्ट छ। अर्को, यो पोर्टल को पर्दामा प्रदर्शित निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक हुनेछ।
को "मेघाफोन-टिभी" कसरी असक्षम?
वेब, मोबाइल आवेदन: सेवा को इन्टरफेस को कुनै पनि माध्यमबाट नियन्त्रित छ। ग्राहक आफ्नो खाता टिभी विकल्प उपलब्ध निम्नानुसार:
उपलब्ध प्याकेजहरू (च्यानल) दृश्य;
नयाँ प्याकेजहरू को जडान;
वर्तमान सदस्यता असक्षम;
सेवाहरूको निष्क्रियकरण (नि: शुल्क)।
त्यसैले, तपाईं सदस्य असक्षम गर्न आवश्यक सबै - सेवा को उपयुक्त सेवा नियन्त्रण बिन्दु जाने छ। कसरी फोनमा असक्षम गर्न "मेघाफोन-टिभी"? एउटा प्रश्न यस्तो अक्सर कलरहरू समर्थन लाइन अपरेटर मा कारोबार गर्दै - सम्पर्क केन्द्र मा। आखिर, यस्तो सेवा अधिकांश मोबाइल उपकरणहरूको मालिकहरूलाई चासो छ। यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सुविधाजनक हुनेछ। तपाईं आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम मा एक स्टोर ग्याजेट मा डाउनलोड गर्न सक्छन्, र यो बिल्कुल निःशुल्क छ।
FACSIMILE - को आविष्कार देखि वर्तमान दिन
एक स्थानीय चेतावनी प्रणाली के हो?
किन एसएमएस आउन? "बीलाईन": सन्देश समस्याहरू
"मेगाफन मेल" प्रकाश संस्करण - यो के हो? कसरी जडान गर्न र विच्छेदन सेवा
पिंजरामा पानीको प्रकार्य। मानव शरीरमा H2O को प्रतिशत
कसरी scallops सरल र स्वादिष्ट खाना पकाउनु?
Djufaston नियुक्त। यसलाई कसरी लिन।